Ciidamada xoogga dalka oo la wareegay gacan ku heynta deegaanka Buur-weyn – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada xoogga dalka oo la wareegay gacan ku heynta deegaanka Buur-weyn
MAREEG 13 February 2016
Ciidamada Xoogga Dalka iyo kuwa AMISOM ayaa xalay kala wareegay maleeshiyada Al Shabab deegaanka Buur-weyn ee hoostaga degmada Buula burde ee gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha Buulaburde, C/casiis Duuroow Cabdi oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in deegaanka buur-weyn ay ahayd goob maleeshiyada Al-Shabaab ay dadka ku dhibaateyn jireen, waxaana uu intaa ku daray in ammaanka deegaanka laga fara maroojiyay argagixisada Al-Shabaab uu yahay mid hagaagsan.
Guddoomiyuhu waxa uu tilmaamay in ciidamada amniga ay sii wadi doonaan howlgallada lagula dagaalamayo argagixisada Al-Shabaab.
“Buur-weyn oo u dhexeysa Jalalaqsi iyo Buulo-burte ayaan kala wareegnay maleeshiyada Al-Shabaab, mana jirto tababbar kale oo ay Shabaabku halkaasi ku imaan karaan, runtii amniga deegaanka waa mid la isku haleyn karo” ayuu yiri C/casiis Duurow.